Mitohy hatrany ny ezaka hataon’ny mpitandro ny filaminana amin’ny famongorana ireo mpanao ratsy mba hisian’ny fandriam-pahalemana eto an-drenivohitra. Teny amin’ny Rond Point Bmh izy ireo no tratra. Samy teo am- panaovana ny asa ratsiny avokoa izy ireo no saron’ny Polisy nanao fanamiana sivily. Ny iray kosa dia sarona noho ny fiaraha-miasa tamin’ny polisin’ny Compagnie Urbaine de Circulation izay efa hikoizana amin’ny harom-paosy eny amin’iny faritra Isotry sy Andavamamba iny. Ny 07 novambra 2021 tokony ho tamin’ny 11ora sy sasany dia mpanendaka iray 19 taona no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny Boriboritany fahatelo Antaninandro sy ny BFP tao amin’ny tsenan’ Andravoahangy ity farany izay fantatra fa dokeran’ ny tsena ihany ary anisan’ny efa karohin’ny Polisy eny an-toerana ihany koa.